USfiso Ncwane usolwa ngokuqola usomabhizinisi | News24
USfiso Ncwane usolwa ngokuqola usomabhizinisi
Durban - Usolwa ngokuqola usomabhizinisi waseDundee enhla nesifundazwe umculi wowokholo uSfiso Ncwane. Lo mculi usolwa ngokwenzela phansi lo somabhizinisi onguMnu Vezokuhle Nala, obehlele umcimbi obizwa ngeDundee Experience obuyizolo khona eDundee, maphakathi neKwaZulu-Natal, lapho bekunemidlalo yebhola kanye nedili lomculo.
Leli phephandaba lithole ukuthi uMnu Nala ukhala uyazithulisa ngesamba esiwu-R35 000, asikhokhele lo mculi esikhathini esingangenyanga esedlule, emqasha ukuba abe yingxenye yabaculi abebezonandisa kulo mcimbi.
"Kuthe ngesikhathi imali ingena nje kwi-akhawunti (yasebhange) kaNcwane wabe esemfonela ecela ukuxolisa ngoba ethi usebonile ukuthi kube nokuphambana kwezinsuku. Uthe mhla zintathu kuZibandlela (December) uzobe enandisa eBotswana. UMnu Nala ube esecela ukuthi uNcwane ayibuyisele emuva imali abesekhokhelwe yona njengoba ubesecacisile ukuthi uzobe engekho, ukuze akwazi (uNala) ukuqasha omunye umculi esikhundleni sakhe," kusho umthimbo.
Nokho uNcwane kuthiwa akaze ayihhoye eyokukhokha, kwaze kwaphoqeleka ukuba uMnu Nala akhiphe ephakethe, aqashe omunye umculi esikhundleni sikaNcwane.
Lo mthombo uthi uMnu Nala udinwe uyaveva ngesenzo sikaNcwane ngoba usezame zonke izindlela zokuxhumana naye ukuze abuyise imali, kanti kuthiwa akasazibambi nhlobo nezingcingo zakhe.
OLUNYE UDABA: ‘Akuyona imfihlo ukuthi uSfiso Ncwane wathwala ngathi’
Ethintwa yileli phephandaba uMnu Nala uvumile ukuthi ubhekene nengwadla njengoba lo mculi sekubonakala sengathi uyabaleka manje nemali yakhe.
"Ngijabule kabi ngesikhathi engitshela ukuthi ngeke akwazi ukuphumelela ngoba ngibona ukuthi ungumuntu oneqiniso. Ngibe sengimtshela ngaso leso sikhathi-ke ukuthi makangibuyisele yona imali yami. Ube ngumuntu ozoyifaka kodwa kuze kube yinamhlanje akakayifaki kanti nakuzo zonke izingcingo zakhe nezenkosikazi yakhe kangisabatholi nhlobo," kusho uMnu Nala, kuzwakala ukuthi ucikekile.
Uthi okumphatha kabi kakhulu wukuthi umtshelile uNcwane ukuthi ufuna ukuqasha omunye umculi ngale mali abese eyinike yena, ngakho-ke ucela asheshe ambuyisele yona.
"Ngize ngaqasha u-Andile KaMajola esikhundleni sakhe nokudingeke ukuthi ngikhiphe kwelami iphakethe ukuze ngimkhokhele.
Kangiyazi le nto engiyenzelwa nguNcwane ngoba phela imali wazi kahle ukuthi ngeyami. Lokhu asekwenza sekuyafana nje nokungiqola," kusho yena ecasukile.
UNcwane nenkosikazi yakhe ephinde ibe yimenenja yakhe u-Ayanda kabatholakanga ukuphawula, izingcingo zabo bezikhala zingabanjwa kanti nemiqhafazo abathunyelelwe yona kabayiphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.